Ny Hafatry ny rahona dia manambatra ny fandefasana hafatra amin'ny adiresy finday ao anaty magazay | Martech Zone
Alarobia, Martsa 18, 2015 Douglas Karr
SmartFocus nambara tao amin'ny Mobile World Congress anio izay hanolorany jiro virtoaly voalohany manerantany. Ireo fanilo virtoaly dia mamela ny marketing eo akaiky eo tsy misy fampidirana fitaovana sarotra na fikojakojana. Ny orinasa dia afaka mitarika fandefasan-kafatra micro-toerana hahafahana mahazo traikefa amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny drafitra fanaovana gorodona fotsiny.
SmartFocus ny Cloud Cloud Ny teknolojia dia manome ny mpivarotra marika fahitana iray manontolo amin'ny mpanjifany, ahafahan'izy ireo manome fifanakalozana ara-barotra manokana kokoa, anisan'izany ny tolotra, fandoavam-bola, tsy fivadihana ary hevitra.
Ny mpanjifa rehetra dia amin'ny diany tsy manam-paharoa. Ny antony manosika hanandrana, hividy, na hijanona fiovana tsy mivadika arakaraka ny tsirairay izay misafidy. Finday dia manana fahefana fidirana 24/7 mankany amin'ny 'fanaraha-maso lavitra' amin'ny fiainan'ny mpanjifanao sy ny fahaizana mamela ny hafatra momba ny varotra manokana miankina amin'ny toerana tsara kokoa noho ny media hafa. Rob Mullen, tale jeneralin'ny SmartFocus
Ilay hafatra rahona manamboatra angona lehibe hahafahana manavakavaka sy mampifandray hatrany ny fifandraisana amin'ny mpanjifa tsirairay. Mampiasà anton-javatra marobe ao anatin'izany ny toerana, toetr'andro, taonan'ny mpanjifa sy ny lahy sy ny vavy, marika sy vokatra tiana indrindra, tantaram-pitetezana tranonkala, fitondran-tena taloha nividy ary sarety nilaozana, The Message Cloud dia mihaino ary mianatra avy amin'ny mpanjifa.
Mpivarotra kilalao lehibe indrindra any UK, ny Mpialamboly, dia mampiasa Cloud Cloud an'ny SmartFocus.
SmartFocus dia manampy amin'ny fanaovana ny traikefan'ny mpanjifanay ho tsara indrindra, na inona na inona fantsona ampiasainay, ary ny SmartFocus Message Cloud dia manome antoka fa afaka manome traikefa momba ny mpampiasa tonga lafatra foana izaho sy ny ekipako isaky ny mandeha. Ny famerenana ny zavatra niainantsika tao amin'ny magazay rehefa mitsidika ny tranokalanay ny tsirairay avy aminay na mandray ny iray amin'ireo hafatray mivarotra dia manakiana anay. Ny vahaolana SmartFocus dia nanolotra anay ny fahaiza-manao rehetra ilainay amin'ny sehatra tokana sy feno. Phil Geary, Lehiben'ny Marketing ho an'ny Mpialamboly
Momba ny SmartFocus
SmartFocus dia manavao amin'ny fandefasan-kafatra sy fifandraisana, ahafahan'ny marika lehibe indrindra manerantany - ao anatin'izany ny Nestlé, Mercedes-Benz, Macy ary i Levi ary hahafantatra sy hifandray akaiky kokoa amin'ireo mpanjifa mifandray ankehitriny; na amin'ny alalàn'ny tranonkala, finday, mailaka na fantsona sosialy. Amin'ny alàlan'ny vahaolana The Cloud Cloud, SmartFocus dia mihaino sy mianatra avy amin'ny mpanjifa mampiasa algorithms patanty ary fitaovana miavaka amin'ny toerana misy azy. Amin'ny alàlan'ny The Message Cloud, ny mpanjifa SmartFocus dia manana angon-drakitra manan-danja, faharanitan-tsaina ary fitaovana ho an'ny fifandraisana tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika.
Tags: Fanilomarketing ara-nofokongresy manerantanymarketing eo akaikyantsinjaranysmartfocusny rahona hafatra